Home News Maxaa ka jira in Al-shabaab duulaan ku yihiin Guriceel !
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa Warbaahinta qaarkood ay baahinayeen in Xubno katirsan Ururka Al-Shabaab ay kusoo dhaweedeen degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud,halkaas oo Maalin ka hor ay Ciidamada dowladda la wareegeen,hayeeshee waxaa Warkaasi beeniyey mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Galgaduud.
Guddoomiye kuxigeenka dhinaca Amniga degmada Ceelbuur Maxamed Sheekh Maxamuud ayaa sheegay wararka sheegaya in Shabaab kusoo wajahan yihiin degmada Guriceel kuna soo dhawaadeen aysan waxba ka jirin.
Deegaannada Warbaahinta qaarkood ay baahiyeen ee la sheegay inay ku sugan yihiin Shabaab ayaa waxaa kamid ah,Waradhuumale iyo dhagaxyaale,waxaana uu sheegay in isaga uu haatan ku sugan yahay deegaanka Waradhuumale,dadkii warkaasi sheeganaya ay yihiin kuwa doonaya inay dadka khalqal geliyaan.
“Dadka warkaasi baahiyey waa kuwa dadka khalqal gelinaya,waxana kama jiraan Al-Shabaab uma soo dhawaan Guriceel,kuwii warkaasi sheegayna waxaa ay mudan yihiin in cadaaladda la horkeeno ayuu yiri” Maxamed Sheekh Maxamuud.
Degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa maalin ka hor isaga baxay Ciidamada Ahlusunna Wal-Jamaaca,waxaana la wareegay dowladda Soomaaliya oo geysay Ciidamo Boolis ah.